Sashalin – Page 130 – News & Entertainments
မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ.. ဒီတစ်ခါတော့ အားလုံးကို ကုသိုလ်လည်းရ ၊ စိတ်ချမ်းသာရစေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းရခြင်းကို ဝါသနာထုံတဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က များများစားစားလည်း မလှူနိုင်ဘူး ၊ ဒါကြောင့် မလှူဖြစ်တတ်တာတွေ များနေတယ်ဆိုရင်တော့ […]
breakingnews AAအကြမ်းဖက်​​သောင်းကျ​န်းသူများ​ထောင်ထားသည့်​ စာသင်ကျောင်းအနီးမှာမိုင်း(2)လုံးအားးတွေ့ရှိ (ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်…)
ဘူးသီးတောင် 17/9/2019 ရွာသားတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ AAအဖွဲ့ဟာ သပိတ်တောင်ရွာရှေ့မှာ မနေ့ကညမှာ မိုင်းထောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းအနီးမှာမိုင်း(2)လုံးအား ထောင်ထားခဲ့ကြတာပါ။ရွာသားတွေဟာ ယနေ့မှာစာသင်ကျောင်းအနီး ကပ်လျက်ထောင်ထားတဲ့ အဲဒီမိုင်းတွေကို AA​ထောင်​တာ​တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး တပ်​မ​တော်​စစ်​​ကြောင်းကို သတင်း​ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ ယနေ့တွေ့ရှိတဲ့ #AA​ထောင်ထားတဲ့မိုင်း(2)လုံးဟာ ရွာသားနဲ့ ​​ကျောင်းသားလူမမယ်​​တွေကို​ ​သေ​စေရန်​ပစ်မှတ်ထားပြီး ရွာသား​တွေထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရပါက တပ်​မ​တော်​ကိုစွပ်​စွဲကာ တပ်​မ​တော်​ကို သိက္ခာကျ​စေရန်​ ရည်​ရွယ်​ပြီး​ […]
လင်ရှိ မိန်းမကို ကြာခိုနေတုန်း လင်ကြီးပြန်လာလို့ ပြေးပေါက်မှားပြီး အဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား (ရုပ်သံ)
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ နောက်မီးလင်းတဲ့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးနဲ့ လင်ကြီးမရှိခိုက်၊ သူမရဲ့ နေအိမ်တိုက်ခန်းအထိ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ၊ ပြေးပေါက်မှားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂွမ်ဒေါင်စီရင်စု၊ Maoming မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အမျိုးသားရဲ့လုပ်ရှားမှုတွေကို ခပ်လှမ်းလှမ်းအခန်းက ဒေသခံလူတစ်ယောက်က ဖုန်းနဲ့ ဗွီဒိယိုမှတ်တမ်း ရယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီအမျိုးသားဟာ လင်ကြီးပြန်လာလို့ နောက်ဖေးမလွယ်ပေါက်ကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ အောက်ကို […]
မယ်တော်ကြီးရဲ့ လျှာကင်ဆာအတွက် သာသနာ့ဘောင်ကနေထွက်ကာ အလုပ်လုပ်ရတော့မယ့် ကိုရင်လေးရဲ့ဖြစ်ရပ်
လူ့လောကမှာ ရှင်သန်တာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ ဒီလို ခက်ခဲတဲ့ လောကကြီးမှာ လူ့ဘောင်ကို စွန့်ခွာပြီး သာသနာဘောင်မှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းရတယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် ခက်ခဲလှပါတယ်။ အခု တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းလေးကတော့ မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် သာသနာဘောင်ကို စွန့်ခွာပြီး လူဝတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတော့မယ့် ဦးဇင်း တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပါပဲ။ ဦးဇင်းရဲ့ ဘွဲ့အမည်ဟာ […]
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ အကဲဖြတ်ဒိုင် ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season 3ရဲ့ winner တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်ဟာ လက်ရှိ မြန်မာအိုင်ဒေါ season 4မှာ မြန်မာပြည်သိန်းတန် မပါဝင်တာဟာ သူ့အနေနဲ့ တစ်ခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ မြင်မိတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့ လက်ရှိယှဉ်ပြိုင်နေကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ သူသဘောကြတဲ့သူ ၀န်းရံရမယ့်သူ […]
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ပေါ့ဆတဲ့တာဝန်ကျဆရာဝန်ဆရာမတွေကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ ကလေးငယ်…
ပြည်ဆေးရုံကြီးကတော့ နဲနဲများသွားပြီ…..ပြည်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဒီနေ့ နှစ်နာရီခန့်က ပေါ့ဆတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကြောင့် ငါးလသားလေးသေဆုံးသွားပါပြီ…. ဖြစ်စဉ်….မနက်(10:00)နာရီခန့်တွင် ပြည်မြို့ ရွှေတံခါးရပ်ကွက်မှ ငါးလသားအရွယ် မောင်သူရိန်ထွန်းမှ အသားများအေးစက်ပြီးကလေးငယ်မှငြီးနေသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အဒေါ်ဖြစ်သူမှ ပြည်ဆေးရုံကြီးပြင်ပလူနာဌာနတွင် သွားရောက်ပြသရာ …. တာဝန်ကျဆရာဝန်မှ ကလေးမှာအဖျားမရှိဘူး …ကိုယ်လည်းမပူဘူးပြော၍ပြန်လွှတ်လိုက်သည် ။ထိုသို့ပြန်လာရာကလေးမှမသက်သာသဖြင့် ၁၃ လမ်းရှိဆေးခန်းမှဆရာဝန်ထံဝင်ရောက်ပြသရာအရေးပေါ်ဆေးရုံသို့ပြန်သွားရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါသဖြင့် …. […]
အောင်ခိုင်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ လူကြမ်းတွေအတွက် ရေးတဲ့စာ
အောင်ခိုင်ရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ လူကြမ်းတွေအတွက် ရေးတဲ့စာ တချိန်က အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုပါ ရရှိခဲ့တဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကြီး အောင်ခိုင်ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူး။ အရမ်းကို ပီပြင်လွန်းတဲ့ အိုက်တင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကို ရောက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်ခိုင်ကတော့ သူပါတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ ဗီလိန်ဆိုလည်း ဗီလိန်နေရာ လွမ်းခန်းဆွေးခန်းတွေပါမကျန် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ […]
ကျောင်းစရိတ်​ရှာဖို့ လမ်း​ဘေးမှာဖိနပ်​ချုပ်​ပြီးမှ ​ကျောင်းသွားတက်​ရတဲ့ ​မောင်​နှမ (ရုပ်သံ)
ကျွန်​​တော်​တို့ ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာ ​တွေ့မြင်​​မိသမျှ က​လေးငယ်​​တော်​​တော်​များများဟာ ​နေ့စဉ်​မုန့်​ဖိုးဆိုတာ မိဘဆီကအလွယ်​တကူ​တောင်းယူနိုင်​တာအမှန်​ပါ။ ဖိလစ်​ပိုင်​နိင်​ငံ၊ Puerto Princesa မြို့က နွမ်းပါးချို့တဲ့​နေတဲ့ ​မောင်​နှမနှစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ အသက်​ ၁၃ နှစ်​အရွယ်​ အမဖြစ်​သူနဲ့ အသက်​ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​ ​မောင်​ငယ်ြ​ဖစ်​သူတို့ဟာ ​​​နေ့စဉ်​တိုင်းမှာ ​ကျောင်းမသွားခင်​အချိန်​ လမ်း​ဘေးမှာ ဖိနပ်​ချုပ်​ပြီး ​နေ့လည်​စာမုန့်​ဖိုးရှာ​ဖွေပြီးမှ […]
ချက်ဖို့ပြင်ထားတဲ့ ကြက်သားက သရဲဝင်ပူးသလို ခုန်ထွက်တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် ထိတ်လန့်ဖွယ် နာမည်ကြီးနေ(ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန်…)
ကမ္ဘာကြီးက ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါး သိပါတယ်။ ခုတ်ထစ်ထားတဲ့ ကြက်သားတုံးတစ်တုံးဟာ အသက်ပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ ခုတ်ထစ်ထားတဲ့ ကြက်သားတုံးတစ်တုံး- အသက်ပြန်ဝင်လာတဲ့ပုံကို ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခု တင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ အခြားအသားတွေနဲ့အတူ တင်ထားတဲ့ ကြက်သားပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်ကို ဗွီဒီယိုထဲမှာ […]
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိသားစု နှစ်စု ထီပထမဆုကြီး ပြိုင်တူပေါက်
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင် မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ (၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆု ဘတ်ငွေ (၆) သန်းဆု 340388 (၃၄၀၃၈၈) နံပါတ် ကို တနေရာထဲ ထီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ပြိုင်တူဝယ်မိခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား မိသားစု နှစ်စု […]
« 1 … 129 130 131 … 146 »